အင်းစိန်လမ်းမပေါ်၌ တက္ကစီယာဉ်မောင်းအားသတ်သူဟု သံသယရှိသူကို ဖမ်းမိ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉-အင်းစိန် လမ်းမပေါ်တွင် တက္ကစီအငှား ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးအသတ်ခံရမှု မှ ကျူးလွန်သူဟုသံသယရှိသူကို အခင်းဖြစ်ပြီး ငါးရက်အကြာတွင် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် (၃) ရပ်ကွက် အထက (၂) မရမ်းကုန်းကျောင်းအနီး အင်းစိန် လမ်းမပေါ်တွင် အငှားယာဉ်မောင်း တစ်ဦးထိုးသွင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာများ ဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က တွေ့ရှိ သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ သေဆုံးသူမှာ ရန်ကင်းမြို့နယ်နေ တက္ကစီယာဉ်မောင်းဦးထွန်းထွန်း လင်း(၄၂)နှစ်ဖြစ်ပြီး ဝဲဘက်ရင် အုံ၊ ဝဲချိုစောင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်တို့တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာငါးချက်နှင့်ပြတ်ရှဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အငှားယာဉ်မှာ တိုယိုတာကို ရိုလာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သမိုင်း လမ်းဆုံမှအင်းစိန်ဘက်သို့ အင်းစိန် လမ်းမအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် အထက(၂)မရမ်းကုန်းကျောင်းနား အရောက်လမ်းလယ်ကျွန်းတုံးများ အနီး ကားမှာရပ်တန့်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် အဆိုပါယာဉ်ပေါ်မှ ဒဏ်ရာများရရှိထားသော သေဆုံးသူ ဦးထွန်းထွန်းလင်းထွက်လာသည် ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ကျူးလွန် သူမှာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်နေ ပြည်သူများ၏ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ယင်းလူသတ်မှုမှာ မရမ်း ကုန်းမြို့နယ်အပိုင်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော်လည်း သေဆုံးသူမှာ အင်းစိန် မြို့နယ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးရောက် ရှိသွားသည့်အတွက် အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အခင်းဖြစ်ရပ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ အသေးစိတ်စစ်ဆေးရာ မော် တော်ယာဉ်ပေါ်တွင် ဂျပန်ဖိနပ် အဖြူရောင်တစ်ရံ၊ ကတ္တီပါဖိနပ် နက်ပြာရောင်တစ်ရံနှင့် သျြခ့ အမျိုး အစား အမျိုးသားပတ်နာရီတစ်လုံး တွေ့ရှိသဖြင့် ယင်းသက်သေခံ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းစုံစမ်းရာ သေဆုံးသူ၏ဇနီးထွက်ဆိုချက်အရ ဂျပန်ဖိနပ်မှာ ¤င်း၏ခင်ပွန်း၏ ဖိနပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကတ္တီပါဖိနပ်နှင့် နာရီမှာ ¤င်းခင်ပွန်း၏ပစ္စည်းများ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သေဆုံးသူကိုင် ဆောင်သှောဗြှွ့ အမျိုး အစား အဖြူရောင်လက်ကိုင်ဖုန်း မှာပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
အထူးအမှုစစ်အဖွဲ့က အခင်း ဖြစ်နေရာတွင်ကျန်ရှိသော သက် သေခံပစ္စည်းများကိုအခြေခံကာ လှိုင်သာယာနှင့် ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်အတွင်း အခြေပြု၍ စုံစမ်းခဲ့ရာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရေဥက္ကံ ကျေးရွာနေ ကိုကိုနိုင် (ခ)ကိုနိုင်ဆိုသူမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် စောစောက ၄င်း၏နေအိမ်သို့ အငှား ယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အင်္ကျီတို့တွင် ရွှံ့များပေကျံ နေကြောင်း၊ အငှားယာဉ်စီးနင်းခကို နေအိမ်ရောက်မှပေးခဲ့ကြောင်း၊ SAMSUNG အမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ဆောင်ထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ ကိုကိုနိုင် (ခ)ကိုနိုင်ဖြစ် ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကိုကိုနိုင် (ခ)ကိုနိုင်၊ (၃၃)နှစ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ်ခန့်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊(၁)ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်း၊ ယင်းမာလမ်းမပေါ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ရရှိထားသည့် သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ¤င်းကလည်း ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ယင်းလူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက် ပြီး အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၄၁/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃ဝ၂ ဖြင့် ကိုကိုနိုင် (ခ) ကိုနိုင်ကို အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက”ကျူး လွန်သူကို ဖမ်းမိပါပြီ။ လက်ရှိမှာ လိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ် နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ရဲစခန်းကို လွှဲပါမယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်ကပြောသည်။
သမိုင်းဝင် ရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရား လှေဦးတိုက်ပွဲတော်တွင် ငှက်လှေအသင်း ၁၄ သင်း စတင် ယှဉ်?
မကွေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရွေးကောက်ပွဲ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ကျင်းပနိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးေ??
ဘာစီလိုနာကို နူးကမ့်တွင် အနိုင်ရရေးမှာ မဖြစ်နိုင်ခြင်း မရှိဟု ပိုချက်တီနို ဆို